The 100 (2014) Season2Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Synopsis of The 100 (2014) Season2Complete
Blu-ray Quality နဲ့မှ ကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့ The 100 Season2လာပါပွီ။ Season 1 အဆုံးမှာ ကလကျနဲ့ သူကဘျောဒါတှကေို မောငျ့ဝယျသာက တောငျပျေါသားတှကေ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားပါတယျ။ မောငျ့ဝယျသာမှာ စားစရာအစုံအလငျနဲ့ အေးဆေးခမျြးခမျြးရှိနပေါရဲ့နဲ့ ကလကျတဈယောကျ မယုံမကွညျ့ဖွဈလာပီး စုံစမျးစဈဆေးတဲ့ အခါ မောငျ့ဝယျသာ လြို့ဝှကျခကျြတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ ? တောငျပျေါသားတှကေ ကမ်ဘာသားတှနေဲ့ ဘာတှကှောခွားမလဲ ? အာကာသကနေ ပွနျရောကျလာမဲ့သူတှကေတော့ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈလာမလဲ ? စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးလေးမို့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပါအုံး
Blu-ray Quality နဲ့မှ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ The 100 Season2လာပါပြီ။ Season 1 အဆုံးမှာ ကလက်နဲ့ သူကဘော်ဒါတွေကို မောင့်ဝယ်သာက တောင်ပေါ်သားတွေက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ မောင့်ဝယ်သာမှာ စားစရာအစုံအလင်နဲ့ အေးဆေးချမ်းချမ်းရှိနေပါရဲ့နဲ့ ကလက်တစ်ယောက် မယုံမကြည့်ဖြစ်လာပီး စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ အခါ မောင့်ဝယ်သာ လျို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ? တောင်ပေါ်သားတွေက ကမ္ဘာသားတွေနဲ့ ဘာတွေကွာခြားမလဲ ? အာကာသကနေ ပြန်ရောက်လာမဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ? စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးမို့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါအုံး
Last air date2020-08-19
Home PageThe 100 (2014) Season2Complete